Izikele zokugqoka, abahlinzeki bezikele zokuthengisa | Aoshengsi
I-Guangzhou 26 Scissors Co., Ltd
Isungulwe ngo-1994, i-26 scissors Industrial Limited ingomunye wabakhiqizi abahamba phambili emhlabeni, abasebenza ngokukhethekile ekwenzeni izinhlobo eziningi zesikelo, okuhlanganisa isikelo sasendlini, isikere sasehhovisi, isikere sezinwele, isikere sasengadini, isikere sasekhishini, isikelo somthungi, isikere sokuhlinza kanye nensimbi yokuhlinza. isikelo njll.
Ngenxa yethimba lethu eliqinile lokuthuthukisa umkhiqizo kanye nethimba elihle kakhulu lokulawula ikhwalithi, kanye nethimba lokukhiqiza elichwepheshile lisenza sihluke kwabanye abakhiqizi embonini. Inkampani yezikele ezingama-26 yakhe izinkundla zokucobelelana ngolwazi zesimanje kanye nemigqa yokuhlangana phakathi neminyaka edlule, eklanyelwe ngokuyinhloko ukuthuthukisa nokukhiqiza zonke izinhlobo zezikele nommese.
Ngomgomo othi “Ikhasimende Kuqala” kanye “Nekhwalithi& Ukudala”ukukhiqiza umkhiqizo ofana kangcono nomklamo wekhasimende. Amaphrojekthi we-OEM ne-ODM amukelwa .I-Si Sense ikusiza ukuthi udizayine futhi ukhiqize imikhiqizo ngokuya ngezici zakho noma imidwebo. Ezinye izinsiza ezenziwe ngezifiso nazo ziyatholakala njengokuphrinta kwe-logo, nokupakishwa okwenziwe ngokwezifiso.
26 sikelo sithemba ukuthi nawe ungakhula futhi uthuthuke emakethe yomhlaba wonke.
I-Si Sense sithemba ukuthi nawe ungakhula futhi uthuthuke emakethe yomhlaba wonke.
I-West Bank Industrial Zone, esifundeni saseJiangcheng, e-Yangjiang, e-Guangdong
UMA UNEMININGI IMIBUZO,